Mudaharaado Rabshada Watay Oo Ka Dhacay Magaalada Berbera iyo Degmooyin Kale OO Gobolka Saaxil Ka Mida. | Somaliland Hargeisa City
Mudaharaado Rabshada Watay Oo Ka Dhacay Magaalada Berbera iyo Degmooyin Kale OO Gobolka Saaxil Ka Mida.
Berbera(Berberanews): mudaharaado ballaadhan oo rabshado wata ayaa saaka ka bilaabmay magaalo madaxda gobolka Saaxil ee Berbera iyo degmooyinka Sheekh iyo Dacarbudhuq oo isla gobolka Saaxil kamid ah.
Boqolaal qof oo ku dhawaaqayay ereyo ka dhan xukuumadda Siilaanyo ayaa aroornimadii hore ee saaka isiugu soo baxay xafiiska badhasaabka gobolka hortiisa. Dadkan ayaa si aada uga xumaaday xilkaqaadistii badhasaabkii gobolka oo xalay madaxweyne Siilaanyo uu bedeley.
Dadkan cadhaysani waxay si aada uga niyad jabeen, bedelka badhasaabka Saaxil oo ay ku doodeyeen inuu tahay mid qabyaaladeed, isla markaana ay ku dhawaaqyeen “” ma doonayno xukuumad qabyaaladadysan, waxaanun taargeersanahay badhasaab RAMAAX””
Dadkan ayaa markiii danbe waxay u keceen dhinaca xafiiksa dawladda hoose ee Berbera waxana halkaasi kula hadlay Maayirka cusub ee Berbera Eng, Cabdishakuur Cidiin. Waxanu uu maayie Eng. Cabdishaakuur dadka kula dardaarmay in aanay mudaharaadkooda rabshado ku darin oo nabadda ay dhawraan.
Hase ahaatee dadweynahan oo uu madaxmaray cadho badan oo ay ka qaadeen sida qaawan ee ay xukuumaddu durbadiiba u bedeshay badhasaab RAMAAX, ayaa markii danbe waxay isku dhaceen koox kale oo taageersanayd goaanka xukuumadda.
Dhagax tuur fara badan ayaa ka dhacay magaalada, waxana waxyeelo gaadhay meheredo badan oo alaab laga jajabiyey, waxana sidoo kale dhagax tuurkii saaka khasaare kasoo gaadhay xafiiska shirkadda DAHABSHIIL.
Dhanka kale, degmada SHEEKH ee gobolka Saaxil ayaa dadweyne cadhaysani ay xidheen wadada laamiga ah ee isku xidha Berbera iyo Burco, waxana ilaa haatan oo saacaddu tahay 2-dii hurunimo ku xanniban gaadiid aad u badan, iyado weriyeyaasha Berberanews ay kusoo waramyaan in koox kamid gaadiidkii halkaas ku xanibnaa ay manta duhurkii ku laabteen degmada Burco.
Weriyeyaasha kala duwan ee shebekedda caalamiga ah ee Berberanews uga soo waramaya gobolka Saaxil ilaa haatan may soo sheegin waxa khasaare nafeed ah oo ka dhashay mudaharaadadan gobolka ruxay.
Mudaharaadadan hadheeyey gobolka Saaxil ayaa ka dhashay faro galin xukuumaddu ku waday golaha deegaanka ee Berbera, taasoo galaafatay badhasaabkii gobolka oo lagu eedeeyey inuu u hogaansami waayay dalabaadkii madaxtooyada, xilkiina si deg deg ah looga qaaday.
Si kastaba ha ahaatee, dadweynaha Saaxil ayaa si aada uga biyo diidsan habdhaqankan xukuumadda ee ku aaddan doorashada golaha deegaanka Berbera iyo guud ahaan xaaladda gobolka oo ay dad badani aaminsanyihiin in xukuumaddu ka leedahay dano ka duwan gobolada kale.
Xigasho: Berbera News
« Sawirro halkan ka daawo mudaharaadkii maanta ka dhacay Berbera
Daawo video-gan dukementeriga ah dadkii reer Somaliland, facii 1aad, 2aad, generation-kii ugu horreeyey ee kenya ku noolaa »